Amisom oo ka hadashay baarista lagu sameeyay Askartooda Munaasabadii dhaarinta Xildhibaanada ee Muqdisho | Baydhabo Online
Amisom oo ka hadashay baarista lagu sameeyay Askartooda Munaasabadii dhaarinta Xildhibaanada ee Muqdisho
Taliska AMISOM ayaa ka hadlay sida ay u arkaan baaritaan lagu sameeyay qaar ka mid ah askartooda xili ay qorsheynayeen in ay gudaha u galaan xaruntii ay ka dhacday dhaarta xildhibaannada 27kii bishan laba Maalin kahor.
Sawir muujinaya askari ka tirsan cidamada booliiska oo baaraya askari ka tirsan Ciidamada AMISOM ayaa lagu baahiyay baraha bulshada, kaasoo muujinaya foojignaantii dheeraadka aheyd ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed intii ay soctay munaasabadii lagu dhaarinayay xildhibaannada.
Taliska AMISOM oo qoraal kooban soo dhigay bogga ay ku leeyihiin Twitter –ka ayaa lagu sheegay in aritan tahay taxadir dhinac amniga ah oo guud ahaan ay qabeen cidamadii ilaalada ka hayay xarunta doorashada, waxaana la sheegay in askariga baarayo laftirkiisa doonayay in uu ka qeyb-qaato sugida amniga xarunta.
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa inta badan wadajir uga qeyb-qaata sugida amniga munaasabadaha waaweyn ee heer Qaran, laakiin waa markii ugu horeysay oo la shaaciyo sawir muujinaya ciidamada Soomaalida oo baaraya askar AMISOM ka tirsan si loo sugo amniga.
Dowladda Soomaaliya oo si kulul u cambaaraysay weerarkii argagaxiso ee Nairobi
Madaxda Qaranka oo ka qeybgalaysa caleema saarka madaxweynaha K/Galbeed